Yakatumirwa ne Tranquillus | June 9, 2018 | Kuvandudza wega
Iwe unoziva izvi mashoma zvinoshamisa pasina kuedza kubva mazviri.
Saka kuti akubatsire, heino chikonzero uye kuti ungabuda sei muboka revanhu.
Iwe une zvose zvaunogona kuwana kuburikidza nekubuda muhukuru:
Zvakangofanana nekambani inoda kumira kubva kumakwikwi ayo, kunze kwevanhu vazhinji ndeyekuti azviratidze semunhu mumwe oga, akasununguka kufunga uye kuzviratidza.
Tinogona kupfupikisa chokwadi chekuve muhuwandu hwandinosuwa zvinhu, tinongorasikirwa noupenyu hwedu.
Inofanana nokuita zvinhu izvo zvisinganyatsonzwisisi kwatiri pasina kunzwisisa kuti sei isu tisingakwanisi kubva muboka revanhu.
Asi kana vanhu vakawanda vari muhukuru, ndezvekuti inogadzirisa, munhu wose anoita chinhu chimwe chete saka zvinoreva kuti ndicho chinhu chakanakisisa chaunofanira kuita.
Iwe unoziva sei kana iwe uri chikamu chemazana?
Kuti uzive kana iwe uri mumwe wevaya vari chikamu chemazana, mubvunzo wakaoma wakakwana: unozviona kupi iwe mumwe kana kupfuura mamwe makore?
Kana iwe usingakwanisi kupindura mubvunzo uyu wakanyora nenzira yekrete, iwe uri muhukuru.
Icho chimiro chevanhu vari chikamu chazvo, havazivi kwavari kuenda uye nei vachienda ikoko.
Asi vanhu vari muhuwandu havanawo kukwana kwakakwana pamusoro pavo pachavo kuti vaite shanduko chaiyo muupenyu hwavo.
Havagone kupinda muitiro pasinei nokuti ivo vakaita zvisarudzo.
Pakupedzisira, chimiro chekupedzisira: kufunga kwakakwana. Munhu ari muhukuru anowanzoreva kuti zvinhu zviripo uye kuti hapana chinhu chinogona kuitwa, chakasviba kana chakachena, asi kwete zvose panguva imwe chete.
Chimwe chinhu chakareruka chiongororwa kazhinji kacho nevatsvakurudzi chinoratidza kuti kana munhu akadonha mumugwagwa, ane chirwere chepfungwa, somuenzaniso, uye hapana anoedza kumununura, hakuna mumwe munhu haazoiti. Icho chinhu chakakosha chatinogonawo kudana "zombification".
Icho chinhu chinosuruvarisa zvikuru chinoratidza kuti sangano redu rinowanzozviisa pamunhu mumwechete kune zvinokuvadza ukama hwevanhu.
Ndezvipi zviito zvaunogona kuisa munzvimbo kuti ubudise muhukuru?
Isu tose tine udyire huri matiri uye kana tikasarwisana nayo, inotora uye inotitungamirira kuti tinyungudzwe muhukuru.
Zvisinei, kune zvigadzirisho zvekubuda kunze kwehuwandu.
Inotanga nekusa kuteerera vanhu vanokuudza kuti haugone kubudirira, vanhu ava vane uturu.
Zvino iwe unofanirwa kuva nesimba rakanaka rekufunga kuti usakure kutya kwako.
Ita zvipikirwa uye unamatira pairi pasinei nezvinetso zvose zvinosanganisira.
Muchidimbu, nzira yakanakisisa yekubuda mushoma inobva kwauri ita chinangwachero zvazviri, uye kubatisisa kwairi nesimba rako rese.
Sei uchifanira kubuda muhukuru? August 24th, 2018Tranquillus
pashureNzira yekugadzira sei nzvimbo yako yekushanda?
zvinoteveraFrench hutano system: dziviriro, mutengo, rutsigiro